Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iintloko zeNovavax kwiCongress ye-Vaccine yeYurophu
Inkampani ye-Biotechnology i-Novavax, Inc. ezinikezele ekuphuhliseni nasekuthengiseni izitofu zokugonya ezizayo zezifo ezosulelayo, namhlanje ibhengeze ukuba uVivek Shinde, MD, usekela-Mongameli, uPhuhliso lweKlinikhi, uza kwenza intetho ngexesha leNgqungquthela yeHlabathi ye-Vaccine Yurophu ngo-2021.
Isihloko sengxoxo siza kuba yiNovavax 'COVID-NanoFlu ™ Combination Vaccine, edibanisa inkampani ye-nanoparticle protein-based COVID-19 kunye ne-NanoFlu ™ abagqatswa be-vaccine ne-Matrix-M ™ adjuvant ngendlela enye.
Iinkcukacha zeseshoni zezi zilandelayo:
Umhla: NgoLwesithathu, Okthobha 20, 2021
Ixesha: 11:30 am - 12:00 pm Ixesha laseMbindi Yurophu (CET) /
5:30 am - 6:00 am Ixesha lasemini laseMpuma (EDT)
Isihloko: Uhlaziyo kuNovavax 'NanoFlu vaccine kunye COVID-19-NanoFlu Combination Vaccine
Umthathi-nxaxheba weNovavax: UVivek Shinde, MD, usekela-Mongameli, uPhuhliso lweKlinikhi
Iqonga lobuchwephesha lobuchwephesha lenkampani lidibanisa amandla kunye nesantya sobunjineli bemfuza ukuvelisa ngokufanelekileyo ii-nanoparticles ze-immunogenic eziyilelwe ukujongana neemfuno zempilo ezingxamisekileyo zehlabathi. I-Novavax iqhuba uvavanyo lweklinikhi ekuhambeni kwexesha kwi-NVX-CoV2373, umgqatswa wayo wokugonya ngokuchasene ne-SARS-CoV-2, intsholongwane ebangela i-COVID-19. INanoFlu ™, iyeza lokuthintela umkhuhlane eline-quadrivalent influenza, lahlangabezana nazo zonke iinjongo eziphambili kwinqanaba lonyango lwesiGaba se-3 esibalulekileyo kubantu abadala abadala. Zombini ezi zixhobo zokugonya zibandakanya i-Novavax 'proprietary saponin-based Matrix-M ™ adjuvant yokunyusa impendulo yomzimba kunye nokukhuthaza amanqanaba aphezulu okunciphisa ii-antibodies.